Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 12
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 12
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 12
Vanhu vazhinji vakaungana. Jesu anovayambira pamusoro pevakuru vavo vezvitendero vaivarasisa.
Tinokasika kudzidza kuti Jesu aive achipikisa kwazvo hutungamiri hwechitendero.
RUKA 12:1 Zvino vanhu vanezvuru zvizhinji vakati vavunganira pamwechete kusvikira votsikirirana, akavamba kutaura kuvadzidzi vake pakutanga,achiti: Chenjerai mbiriso yavafarise, ndiko kunyengera.
Kunyengera kunyepedzera. Vaparidzi vanoti vanoparidza kubva muBhaibheri, asi havatsigiri zvavanotenda kubva muBhaibheri. Vanopikisa zvikuru avo vanotevera Magwaro. Vaparidzi kunze vanotaura kwazvo rudo rwavo naMwari. Asi vanobva vapa vanhu dzidziso dzakaitwa nevanhu sekunge dzinenge dzichibva muBhaibheri Shoko raMwari.
MATEO 15:8 Vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo,asi moyo yavo iri kure neni.
Kana vanhu vakagadzira chitendero, kutambisa nguva zvako. “Pasina” zvinoreva kuti hazvina maturo uye hazvina tariro mazviri.
Vanhu vakashandura “inzwi remutumwa wechinomwe” kuva zvava kunzi nhasi uno “Inzwi raMwari”.
Vaparidzi vanotya kwazvo kubvuma kuti vazivi vakapinda mumba. Nhengo yekereke yehupenyu hwese yemakore 80 yakabvuma kuti yaive isati yambonzwa kuti vazivi vekumabvazuva vakapinda mumba. Imwe nhengo yekereke yakatuka munhu zvekumutumira kugehena nekuti aive ataura kuti vazivi vakapinda mumba. Anoti Mwari akamuudza kuti araire munhu uyu chivi chake chikuru chaive chekuverenga vhesi iri kubva muBhaibheri. Paakabvunzwa pamusoro penyaya iyi, muparidzi aitenderera kutorongo akadanidzira akati: asina kumbovhura Bhaibheri rake, “ Bhaibheri rangu rinoti vazivi vakapinda muchidyiro”. Paakaverengerwa vhesi racho kuti maive mumba, akatsamwa kwazvo akafamba akaenda asina kana chaakakwanisa kutaura.
Nei vanhu vazhinji vachiramba kuti vazivi vakauya mumba? Chii chavari kuvigiridza.
Sezvakataurwa naShakespeare “Pane chakaora muchinzvimbo” chekereke.
RUKA 12:4 Ndinoti kwamuri, hama dzangu: Musatya vanovuraya muviri, vasingazogone kuita chinhu chimwe shure kwaizvozvo.
Mhondi dzingatiuraye. Havasi vanhu vakanaka. Kuuraiwa kwakaipa, asi hakukanganisi nzvimbo ichanogumira mweya yedu.
RUKA 12:5 Asi ndichakuratidzai wamunofanira kutya; mumutye iye, unoti kana avuraya, une simbavo rekukandira muGehema. Hon’o, ndinoti kwamuri: mumutyei iyeye.
Asi vakuru vezvitendero vanokudzidzisai dzidziso dzinorwisa Bhaibheri. Hakuna mavhesi eBhaibheri anotaura nezve “Tiriniti”, “Mwari Mumwe muVanhu vatatu”, “Mumwe Vatatu”, Vatatu Mumwe”, “Munhu wechipiri mukuzara KwehuMwari”, “Mwari Mwanakomana”, “Mufundisi ndiye musoro wekereke”, “Mufudzi ndiye mufundisi’, “Chegumi ndechamufundisi”, “Jesu akazvarwa musi wa 25 Zvita”, “Kupemberera zuva rakazvarwa Ishe”, “Vazivi vakapinda muchidyiro kunoona Mwana Jesu”, “Zvakanaka kuti vakadzi vaparidze”, “Kubvisa mimba hakuna chakaipa”, “Wanano yemurume nemurume kana mukadzi nemukadzi yakanaka”,nezvimwe zvakawanda.
Saka mutsetse unoramba uchikura asi zvese hazvisi muBhaibheri ndizvo nheyo “dzechichechi-chechi” chanhasi.
Kana ukafa uchitenda kuti kutadza kwevanhu ndiko chokwadi, zvino mweya wako uchawirwa nei? Nei makabviswa kuenda kure kubva pane zvakadzidziswa naPauro nemapostora? Havana kubvira vataura zvinhu izvi zvose.
Ndiyani anodzidzisa kutadza uku kwese? Vakuru vemakereke edu. Vanokwanisa kusakuurayai panyama nekuti vanhu vakanaka vanoti vari kudzidzisa zvinotaurwa neBhaibheri. Asi vanoisa mweya yenyu munjodzi yegehena, chinova chinhu chakaipisisa.
Mwari anoziva zvose pamusoro pedu uye anokwanisa kutichengetedza, kunyangwe vemakereke vakatiramba.
RUKA 12:7 Asi nebvudzi remusoro wenyu rakaverengwa rose. Musatya, munopfuvura shiri duku zhinji.
Tinogona here kumira neMagwaro pamberi petsika nezvinyakare zvekereke? Takashinga zvekukwanisa kubvunza mubvunzo kumukuru wekereke here tichizvivengesa.
RUKA 12:8 Ndinoti kwamuri: Mumwe nomumwe unondipupura pamberi pavanhu, Mwanakomana womunhu uchamupupura vo, pamberi pavatumwa vaMwari.
Kana vakuru vemakereke vakatibvisa uye vamwe vanhu vemukereke vakativenga, tinofanira here kunyarara toita kutadza kumwechete navo?
RUKA 12:9 Asi unondiramba pamberi pavanhu, ucharambwawo pamberi pavatumwa vaMwari.
10 Mumwe nomumwe unoreva shoko rakaipa pamusoro poMwanakomana womunhu, uchakanganwirwa asi unomhura Mweya Mutsvene haangakanganwirwi.
Kana Mweya Mutsvene ukazivisa chokwadi cheMagwaro vanhu vemukereke nevatungamiri vakapomera munhu iyeye kuti anotenda mumweya yakaipa, vachiitira kuchengetedza tsika dzekereke yavo, ipapo vanenge varasika.
RUKA 12:11 Kana vachikuisai pamberi pamasinagoge navatongi navakuru, musafunganya kuti muchapindura sei, kana inyiko, kana muchataurei.
Chokwadi chichagara chichiuraiwa nekupikiswa. Saka ngwarirai, hupenyu hwemukereke hwakanaka kwamunofara kufadza nekubvumirana nezvinoparidzwa, hahusi humbowo hwekutenda kuchokwadi.
RUKA 12:15 Akati kwavari: Chenjerai, muzvichengete pakuchiva kwose, nokuti vupenyu habwuzi pazvinhu zvakawanda zvaanazvo.
Nhasi vanhu vanoona humbowo hwemakomborero aMwari sehupfumi. Uku kusanzwisisa kwakaipa. Musafamba nenzira iyoyo.
Munozvipira here kutevera Mwari chero mukurasikirwa?
RUKA 12:16 Akavataurira mufananidzo, akati: Nyika yomumwe mufumi yakanga yabereka kwazvo;
Saka mufumi akasarudza kuvaka matura makuru kuti achengetere chikafu chose. Aive nemari yakakwana kwemakore mazhinji. Apa aizogarika nekudya, nekunwa nekufara. Asi akabva afa husiku ihwohwo, akazviita benzi.
RUKA 12:21 Ndizvo zvinoita munhu anozviunganidzira fuma asingafumi kuna Mwari.
Chokwadi ndiyo pfuma kuna Mwari. Tendai nekutevera chokwadi mugozviwanira nhaka kudenga. Ndiko kupfuma kwechokwadi. Vimbikai kuShoko raMwari pchinzvimbo chekusungirira mweya yenyu pamakaro asingaperi ekuunganidza pfuma.
MATEO 19:24 Ndinoti kwamuri zve: Kamera ingarerukirwa kupinda pavuri redunho, kumufumi kupinda muvushe bwaMwari.
Kuwanda kwemari yaunounganidza, ndiko kuomawo kwazvo kuti ugone kupinda denga.
Hatifaniri kufunganya pamusoro pezvinhu zvinodiwa kuti tirarame zvenyika ino. Nekuti tinofunganya tikakasika kufa nekuita zvinhu zvese zvatinoziva kuti zvakaipa (sekuba mutero kana kuba pabasa).
RUKA 12:22 Zvino wakati kuvadzidzi vake: Naizvozvo ndinoti kwamuri: Musafunganya pamusoro povupenyu bwenyu, kuti muchadyei, kana pamusoro pomuviri wenyu, kuti muchapfekei?
30 Nokuti zvinhu izvozvi zvose zvinotsvakwa navahedeni; asi baba venyu vanoziva kuti munoshaiwa izvozvo.
Kana, semaKristu, chido chenyu chikuru kuri kurarama nekutsvaka chinokuraramisai, zvino hapana chamakasiyana nevasingatendi nekuti izvozvo ndizvo zvido zvavo zvikuru.
RUKA 12:31 Asi tsvakai vushe bwavo, naizvozvo zvose muchazviwedzerwa.
Tangai mashingirira kurarama maererano neMagwaro nekuteerera Shoko raMwari. Ndicho chinofanira kuva chinangwa chedu chikuru mukurarama. Kutevera hutungamiri hwaMwari, zvisinei nekuti zviri kureva zvishoma sei kwatiri, tobva tamusiira kuti atiwedzere nepaanoda napo. Musagunun’une kana akabvisa zvinhu kwamuri. Anoziva zvakatinakira uye isu hatiziva zvakatinakira.
“Kapoka kaduku”- pakupedzisira kuchava nemaKristu mashoma achasara ari panzira yechokwadi. Saka musanyengerwa nemasangano makuru uye huwandu hwevanhu maari.
Mubairo wedu mukuru uchave nhaka Kudenga. Hatina chatinogona kuita nezvazvo asi kuterera nekutevera Mwari, sezvo iye ega ndiye achatipa nhaka iyi. Saka kana tichimumirira kuti atipe mubairo mukuru, nei tisingamuvimbi kuti anotipa zvatinoda panyika pano zvakare? Nei tichidzingirirana zvakanyanya nezvinhu zvepasi rino zvatinofunga kuti tinoda?
RUKA 12:34 Nokuti panefuma yenyu, nomwoyo wenyu uchavapo vo.
Dambudziko redu sevanhu nderekuti tinoshingirira pazvinhu zvenyika ino zvatinoona, kwete pazvinhu zvemweya zvatisingavoni. Tinokoshesa zvinhu zvinowonekwa asi kana tikatendera Mwari kuti ashandure simba redu rekufunga tichaona kuti zaruriro yeShoko rake Bhaibheri yakakosha kwazvo kukunda zvimwe zvinhu zvose zviri panyika.
RUKA 12:35 Zvivuno zvenyu ngazvigare zvakasungwa, nemwenje yenyu ipfute.
II SAMUERI 20:8 Zvino Joabi wakanga akazvisunga nguvo yake yokurwa nayo yaakanga afuka, iyo yakanga yakasungwa nebhanhire rakanga rinomunondo wakasungirwa pachivuno chake; ...
Bhanhire mucheka unomonerwa pamunhu kuti akwanise kusimbisa nguvo yemunondo wake pabhanhire remuchivuno chake.
VAEFESO 6:14 Naizvozvo, mirai makasunga zvivuno zvenyu nechokwadi,
Chokwadi chinoyananiswa nehupenyu huri muchivuno memunhurume.
Kubva pakusunga kwechokwadi tinosimbisa munondo weShoko raMwari, sezvo Shoko raMwari ndicho chega chokwadi chatiinacho.
VAEFESO 6:17 Torai ngowani yoruponeso, nomunondo weMweya, iro Shoko raMwari.
Muzvivuno medu ndimo munobva hupenyu.
Hupenyu husingaperi hunobva kuBhaibheri.
ISAYA 8:20 Dzokerai kumurairo nekuzvipupuriro! Kana vasingatauri sezvinoreva shoko iri, havangavi nechiedza chamangwanani.
Chiedza chimwechete chatirinacho ndiro Shoko raMwari, Bhaibheri.
II PETRO 1:19 Vuye tine shoko rovuprofita rakasimba kwazvo, ramunoita zvakanaka kana muchiriteerera, rakaita somwenje unovhenekera munerima, kusvikira vutonga bwuchitsvuka, nenyamasase ichibudira mwoyo yenyu.
Chiedza cheBhaibheri ndicho chega chinogona kutivhenekera. Zvimwe zvinhu zvose irima rega.
Zviedza zvedu zvinopfuta chete patinotaura zvakanyorwa muShoko raMwari. Patinovaudza zvakanyorwa muBhaibheri.
RUKA 12:40 Nemi vo mugare makazvigadzira, nokuti Mwanakomana womunhu uchavuya nenguva yamusingafungi.
Zvese zvichaitika neKuuya kweChipiri zvichange zvakaoma kwazvo pane zvatinofungira.
RUKA 12:42 Ishe akati: ndiyaniko mutariri wakatendeka,wakachenjera, uchaiswa nashe wake pamusoro pavaranda vake, kuti avape mugove wezvokudya zvavo nenguva yakafanira?
“Zvokudya nenguva yakafanira”. Kuziva patiri muhurongwa hwaMwari nhasi. Kuyananisa dzidziso dzaWilliam Branham neMagwaro kuti tidzoserwe kune zvakatendwa nevatendi vekereke yeTestamente Itsva. Kuziva kuti Jesu, Shoko, ndiye mukuru wedu. Kurarama neShoko rakaziviswa rakanyorwa. Kwete kufungidzira zvichibva pamazwi akataurwa nevanhu.
RUKA 12:43 Wakaropafadzwa muranda uyo, unoti kana ishe wake achisvika, akamuwana achiita saizvozvo.
44 Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kuti uchamugadza ave mutariri wazvose zvaanazvo.
Kutaridza kuti zvakadzidziswa nehama Branham zvinokwanisa kudzidziswa kubva kuMagwaro chete. Ndicho chinangwa chehurongwa hwaMwari nhasi. Tendai zvinotaurwa neMagwaro chete.
RUKA 12:45 Asi kana muranda uyo akareva mumoyo make, achiti: Ishe wangu anonoka kuvuya; akatanga kurova varanda , varume navakadzi, akadya, akanwa, akabatwa,
47 Muranda uyo wakaziva kuda kwashe wake, akasagadzira, kana kuita kuda kwake, ucharobwa zvizhinji.
Vanoparidza “Mharidzo” vanozadza vanhu nemazwi avakabata achitaurwa asingaperi. Makereke anotyisidzira nekudzinga vapikisi vanoda havo kutevera Magwaro. Vafundisi vanofara vanosekerera nekuzvirereka, asi vanotonga zvisina tsitsi. Hakuna vafundisi vakabvira vatonga kereke mukereke yekutanga yeTestamente Itsva. Dzidziso dzakaitwa nevanhu netsika dzemakereke ndizvo zvinotonga vanhu nhasi uno. Itai saizvozvo kana kuti.
Vaparidzi “veMharidzo” vanorarama vachidzidzisa nekuturikira mazwi akataurwa nevanhu vachiziva zvavo kuti tinofanira kudzoserwa kuMagwaro vachatongwa zvakaoma. Vakuru vemakereke vanoramba kudanwa kwekuti tidzoserwe pane zvinoreva Testamente Itsva vachasarirawo munguva yeKutambudzika kukuru.
RUKA 12:48 Asi usina kuziva, akaita zvakafanira kurobwa, ucharobwa zvishoma, wakapiwa zvizhinji zvichatsvakwa kwaari; unotendwa nezvizhinji, vachareva zvinopfuvura kwaari.
Vaparidzi vemasangano vasina zvizhinji zvavanoziva vacharangwa zvishoma. Asi kana Mwari achinge avhura meso edu, zvino anotarisira zvizhinji kubva kwatiri. Mwari anoda kuti tidzoserwe kukereke yekutanga isina kubvira yaparidza pamusoro peKutinhira kunomwe, kana mazita matsva aJesu, uye havana kumbotaura kuti Ishe akatouya segore guru. Kana kutenda kuti Mutumwa wekuna Zvakazarurwa Chaputa 10 akatouya segore guru (rakangogarira mudenga pachinhambwe chinoita makiromita 42 kubva panyika). Vekereke yekutanga vaisangana mudzimba uye havana kumboita vafundisi sevatungamiri vemakereke. Hakuna pakanyorwa nezvechegumi chichipiwa mufundisi muTestamente Itsva pakereke yekutanga.
Mazano matsva mumakereke ari kuramba achinyuka. Saka zvakaoma kwazvo kuti mugare muchiziva zvese.
Kudzokera pakutenda kweTestamente Itsva kuri nyore kwazvo nekuti hwaro hwacho hunoramba hwakadaro haushanduki.
Saka vaparidzi “veMharidzo” vachasangana nemutongo wakarema munguva yekutambudzika kukuru. Vaiziva zviri nani asi vakaramba kutevera Magwaro nekuti vanhu vaida mazwi akataurwa nevanhu uye kuturikira mazwi akataurwa nevanhu. Vanhu veMharidzo vaida hutungamiri hwevanhu venyama. SaAroni paGomo reSinai, vafundisi vanopa vanhu mufananidzo wendarama wakasviba wekutadza zvinoita kuti vaparidzi vapfume asi vatendi veMharidzo vari kure kwazvo nekutenda zvakafanana nezvakatendwa nemaKristu emuTestamente Itsva.
RUKA 12:50 Ndinorubhapatidzo rwandichabhapatidzwa narwo, ndinomanikidzwa sei kusvikira zvichiita!
rubapatidzo mucherechedzo wekufa. Jesu akava akatendeka kusvika pakufa. Tine kushinga kwerudzi urwu here?
RUKA 12:51 Munofunga kuti ndakavuya kuzopa rugare panyika here? Ndinoti kwamuri: Kwete, asi kupesanisa.
Chokwadi cheBhaibheri chinokonzera kuparadzana mudzimhuri. Tine kushinga kwekupikisa nhengo dzemhuri dzatinobva here?
RUKA 12:53 Baba vachapesana nemwanakomana wavo, nomwanakomana nababa vake, mai nomwanakomana wavo, vamwene nomukadzi womwanakomana wavo, nomukadzi womwanakomana navamwene vake.
RUKA 12:54 Akati kuvanhu vazhinji: Kana muchivona gore richikwira kumavirira, pakarepo munoti ichanaya: zvoita saizvozvo.
Muna 1963 gore guru rakavonekwa pachinhambwe chemakiromita 42 muchadenga, kwaive kusina hunyoro hwekuita gore, rakafamba richidarika muAmerica kubva kunhivi dzemadokero dzeCalifonia kuenda kuFkagstaff kuArizona rikazoenda kuNew Mexico.
Kwapera vhiki vatumwa vanomwe vakauya kuna William Branham vakamupa basa kuti aparidze pamusoro pezaruriro yekuziviswa kwezvisimbiso zvinomwe. Zaruriro idzi dzakamugonesa kuti anzwisise zvakavanzika zvizhinji zviri muBhaibheri.
Izvi zvinomiririra hondo yemweya apo kutadza kwemasangano kwakabva kwaziviswa. Mhepo mucherechedzo wekusawirirana makereke emasangano airwa nekunzwisisa kwakadzama kweBhaibheri uku.
Zaruriro yekuziviswa kwezvisimbiso zvinomwe kwaive kupfunha kwemvura dzemweya kubva muShoko raMwari kwakamugonesa kudzosa dzidziso dzekereke yekutanga yeTestamente Itsva.
Vamwe vatendi vaizoshingirira kudzoserwa pakutenda kwekereke yeTestamente Itsva. Vamwe vaisazodawo kuita izvi.
RUKA 12:55 Kana muchivona mhepo ichivhuvhuta ichibva Zasi, munoti: kuchapisa kwazvo, zvoitika.
Kuzasi kweIsraeri kune renje rinopisa reSinai. Kana mhepo ikavhuvhuta ichibva zasi, inounza mhepo yerenje inopisa uye ine jecha munyika yeIsraeri. Pamweya uyu mucherechedzo wekupisa kwekurovererwa. Kereke yakatuka William Branham. Avo vakatambira dzidziso dzake vakadzidzosera kuMagwaro vanotukwa neavo vanokoshesa kungotevera mazwi aakataura, vasingatsvagi chokwadi chawo kubva pakumayananisa nemavhesi eBhaibheri. Pakupedzisira nguva yeKutambudzika kukuru icharoverera maKristu ese vasina kudzoserwa kudzidziso dzekutenda kweTestamente Itsva.
RUKA 12:56 Imi vanyengeri, munoziva kududzira zvamunovona zvenyika nezvekudenga, asi hamuzivi nei kududzira nguva ino?
Tinofanira kugona kuona zviitiko zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti tave munguva yekupedzisira.
Tinonetseka kuona zviratidzo zvenguva. Hatikwanisi kana kugadzirisa zvinhu zvemurairo mumatare nekuti hatigoni kubvuma kana tichitadza.
RUKA 12:57 Munoregereiko kuzvitongera mumene zvakarurama?
58 Nokuti kana uchienda kunashe nomudzivisi wako, idza kuti uregedzwe naye muchiri munzira; kuti arege kukukwirira kumutongi, mutongi akuise kumupurisa, mupurisa akusunge mutorongo.
59 Ndinoti kwauri, haungatombobudimo, usati waripa kamari kwokupedzisira.
Jesu anochema pamusoro pekusada kwevanhu kubvuma kutadza kwavo. Hatikwanisi kubvuma kuti tinotadza padzidziso. Hatidi kubvuma kuti tinoita zvinhu zvakaipa.
Kurwira chakaipa ndicho chikonzero chikuru chirikuendesa maKristu akaponeswa kunguva yeKutambudzika kukuru.